न्युकासल युनाइटेड बिजयी, सेफिल्डको नराम्रो हार – Talking Sports
न्युकासल युनाइटेड बिजयी, सेफिल्डको नराम्रो हार
न्युकासल युनाइटेडले इङ्गलिस प्रिमियर लिगमा सेफिल्ड युनाइटेडमाथि ३-० को सहज जित हात पारेको छ ।
सेन्ट जेम्स पार्कमा भएको खेलमा न्युकासलका लागि एलान सेन्ट म्याक्सिन, म्याट रिची र जोलिन्टनले गोल गरेका थिए । जितपछि न्युकासल ३८ अंकका साथ १२ औं स्थानमा उक्लिएको छ भने सेफिल्डले पाचौं स्थानमा जाने मौका गुमाएको छ ।
हाल दोश्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीलाई युरोपमा खेल्न प्रतिबन्ध लागेका कारण पाचौं स्थानको टोलीले पनि च्याम्पियन्स लिगमा प्रवेश पाउने छ । उल्भ्ससँग समान ४६ अंक रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेड पाचौं स्थानमा रहेको छ भने सेफिल्डको ४४ अंक छ ।
घरेलु मैदानमा न्युकासलले पहिलो हाफमा सेफिल्डालाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो । जोन एगनले दोश्रोे पहेलो कार्ड खादै मैदानबाट बाहिरिएपछि सेफिल्ड १० खेलाडीमा सिमित भएको थियो । त्यसको भरपुर फाइदा न्युकासलले उठाएको थियो । पाँच मिनेटपछि नै सेफिल्डले डिफेन्समा गरेको गल्तीको फाइदा उठाउदै सेन्ट म्याक्सिनले अग्रता दिलाएका थिए ।
रिचीले ६९ र जोलिन्टनले ७८ औं मिनेटमा गोल गर्दा सेफिल्डले नराम्रो हार बेहोर्न पुग्यो । आइतबारको दोश्रो खेलमा चेल्सीले एस्टन भिल्लाको सामना गर्दैछ भने मर्सिसाइड डर्बिमा लिभरपुलले एभर्टनसँग खेल्नेछ । एभर्टनलाई हराएको खण्डमा लिभरपुल प्रिमियल लिग उपाधिबाट एक जित मात्र टाढा रहनेछ ।
युरोपियन राउण्ड–अपः लिभरपुल जोगियो, रियल शिर्ष स्थानमा, इन्टरको जित
जब रोनाल्डिन्होलाई मैदान बाहिर निकाल्न पाँच लाखको प्रस्ताब आयो
इजरायलीसंग सामना नगर्न अल्जेरियन जुडो खेलाडीले ओलम्पिक्स त्यागे
टोकियो ओलम्पिक्सः नेपालका दुवै खेलाडी पहिलो चरणबाटै आउट
फर्नान्डो र राजपाक्साको अर्धशतकमा श्रीलंकाको सान्त्वना जित
ओलम्पिक्स इतिहासका १० अविस्मरणीय क्षणहरु
ओलम्पिक्सको भयावह नाजी परम्परा जुन अझै कायम छ
नैम र सरकारको शतकिय साझेदारीमा बंगलादेशको जित
ओलम्पिक्सको सबैभन्दा कान्छी खेलाडी जाजाको सुन्नै पर्ने कहानी
गर्मिको मौसम र हेन्ड जाजा १२ बर्षकी भएकै कारण पनि शनिबार उनले गरेको कृयाकलापलाई तपाई रमाइलोको रुपमा लिन सक्नु हुन्छ ।
जाजा एक भ्रमणमा थिइन् । सामान्य समयभन्दा उनी राती ढिलो सुतिरहेकी थिइन् । धेरै साथीहरुसंग घुमिरहेकी थिइन् । अथवा यस्ता मानिसहरुसंग जसको लक्ष्य र रुची एकै थियो ।
उनले आफूलाई सबैभन्दा मन पर्ने खेलमा प्रतिस्पर्धा पनि गरिन्: टेबल टेनिस ।
र यो सबै ओलम्पिक्समा भयो ।
हो । १२ बर्षिय सिरियन फुच्चीले टोकियो ओलम्पिक्समा प्रतिस्पर्धा गरिन् । बाह्र । जाजा जारी ओलम्पिक्सकी सबैभन्दा कान्छी खेलाडी हुन् र बिश्व खेलकुदको महाकुम्भ इतिहासकै सबैभन्दा पाचौं कान्छी ।
१३ बर्ष २ सय ५५ दिनमा नेपाली जलपरी गौरिका सिंह पांच बर्ष अघि ब्राजिलमा भएको रियो ओलम्पिक्समा सबैभन्दा कान्छी सहभागी थिइन् ।
कोभिड -१९ नभएको भए उनी ओलम्पिक्समा सहभागी हुंदा जम्मा ११ बर्षकी हुने थिइन् । जाजा कति बर्षकी भइन् ? उनी २००९ को जनवरी १ मा जन्मिएकी हुन् ।
तपाईसंग के बहाना छ ?
उमेरको तुलनामा अग्ली रहेकी जाजाको लागि टेबल टेनिसको टेबलबाट माथि चिहाउनु पर्ने स्थिति भने थिएन । तर उनले शनिबार सामना गरेको बिपक्षी भने उनी भन्दा तीन गुणा बढी उमेरकी थिइन् ।
जाजाकी बिपक्षी अष्ट्रेलियाकी जिया लिउ ३९ बर्षकी भइसकिन् । उनले आफ्नो छैटौं ओलम्पिक्समा सहभागिता जनाइरहेकी थिइन् ।
यो शताब्दीमा २००४ को एथेन्स ओलम्पिक्स र २००८ को बेइजिंग ओलम्पिक्स हुंदा जाजाको संसारमै अस्तित्व नै थिएन । २०१२ मा लण्डनमा ओलम्पिक्समा हुंदा उनलाई आफनो अस्तित्वको बारे ज्ञान पनि थिएन ।
लिउसंग जाजाको कुनै प्रतिस्पर्धा नै थिएन । लिउले ११-४, ११-९ र ११-५ को सोझो सेटमै जित हात पारिन् । खेलपछि आंशुले भरिएका जाजाका आखा रातो भएपनि उनको हारको चर्चा हुंदैन । कहिल्यै पनि हुने छैन ।
“मैले यो खेल जित्ने आशा गरेको थिए । मैले राम्रो खेल्ने मात्र आशा गरिरहेको थिए,” जाजाले खेलपछि भनिन् ।
एक दिन जाजाले ओलम्पिक्समा उपस्थित हुनु नै पर्याप्त रहेको भन्ने बुझ्ने छिन् । उनले एक दिन अघि सिरियाको झण्डा लिएर ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहको परेडमा सहभागी भएकै कारण नै आफू सुत्ने रुटिनलाई बिगारेकी थिइन् । यो राम्रो कारण नै होला, होइन ?
बच्चा भएको कारण प्लेनको यात्राले निम्त्याएको समस्यासंग जुझ्न उनी संघर्ष गर्दै थिइन् । र जाजाको ओलम्पिक्समा सहभागी हुने उत्साहले सिमा नाघिसकेको पनि थियो ।
उनी धेरै रात अनिंदो भएरै बसेकी थिइन् ।
जाजा पांच बर्षको हुंदा देखि नै टेबल टेनिसमा लागेकी थिइन् । उनको दाईओबेदाले स्थानीय प्रतियोगिताको उपाधि जित्दै ट्रफि घरमा ल्याएपछि जाजालाई पनि आफ्नै उपाधि घर ल्याउने इच्छा जागेको थियो ।
टेबल टेनिस जाजाका लागि सिरियाको गृह युद्धबाट मुक्ति र मन भुलाउने माध्यम र एक किसिमको पागलपन नै भएको छ ।
उनको शहर हामा निरन्तरको बमबारीका कारण ध्वस्त भएको थियो । युद्ध र आतंकले परिवार र समुदायलाई नै प्रभावित गर्दा जाजाको लागि टेबल टेनिस सामान्य खेल नभएर आश्रय नै बनेको थियो ।
“हामी चुनौतिपूर्ण परिस्थितीमा बाचिरहेका थियौं । तर हामीले यो परिस्थितीलाई नियन्त्रण गरिरहेकोछौं । जब हामी खेल्न थाल्छौं हामी सबै कुरा बिर्सन्छौं । हामी बिश्व सामु चुनौति दिन सक्छौ भने र नै प्रशिक्षण गरिरहेको छौं । टेबल टेनिसले मलाई सबै कुरा दियो । मलाई बलियो बनायो र आत्मबिश्वास पनि दियो,” जाजा भन्छिन् ।
सिरिया टेबल टेनिसको लागि परिचित देश होइन । जाजाअघि मात्र एक खेलाडी टेबल टेनिसमा छनौट भएको छ । २०२० को शुरुवातमा जाजाले पश्चिम एसियाको छनौट चरणमा ४२ बर्षीया खेलाडीलाई हराए पछि आफ्नो स्थान बनाएको थिइन् ।
उनले एक अतिरिक्त बर्ष आफूलाई तैयार गर्नको लागि खर्चिन् । मेरो प्रदर्शन सुधारिएको छ , उनी भन्छिन् । तर यो सहज भने थिएन ।
उपयुक्त प्रशिक्षण र श्रोत पाउनु दैनिक चुनौति नै थियो । घरबाट बाहिर निक्लन पनि सुरक्षाको आवश्कता पर्ने गर्छ । सिरियामा न आकस्मिक न भविष्य सुरक्षित छ । खेल्नको लागि लगानी निश्चित र भरपर्दो पनि हुने गर्दैन ।
सिरियामा सिंगो देशलाई नै ओलम्पियनहरुको समर्थनमा केही गर्ने भन्दा अन्य धेरै चुनौतिहरु रहने गर्छन् ।
तर जाजाले हार खाइनन् । आफ्नो कथाले प्रभावित गर्न सक्ने बच्चाहरुको लागि केही भन्न चाहनु हुन्छ भन्ने बिषयमा उनलाई प्रश्न गरिएको थियो ।
पछिल्लो पांच बर्ष मैले धेरै कुराहरु अनुभव गरे, बिशेष गरि देशमा युद्ध चल्दै गर्दा । ओलम्पिक्स स्थगित हुंदा र आर्थिक सहयोग पाउन मैले धेरै संघर्ष गर्नु पर्यो । मैले यसको लागि लडाइ नै जित्नु परेको थियो । जति नै गाह्रो भए पनि तपाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि लडाई लड्नु भन्ने सन्देश म दिन चाहन्छु , उनले भनिन् ।
जाजाको लक्ष्य ओलम्पिकमा फेरि फर्किएर राम्रो गर्दै बिश्व बिजेता र ओलम्पिक बिजेता बन्नु नै हो ।
“म खेल्न बन्द नै गर्दिन । टेबल टेनिस मेरो जिन्दगी हो । मैले मेरो जीवन नै टेबल टेनिसलाई दिसकेको छु । जुन दिन म प्रशिक्षण गर्दिन म बाट केही कुरा मिस भइरहेको जस्तो महसुस हुन्छ ।”
तर जाजा टेबल टेनिस बाहेक अरु धेरै कुरा पनि हुन् ।
उनी पढ्छिन्, पौडी खेल्छिन्, बास्केट खेल्छिन्, टिभिमा सिरिज हेर्छिन् र आफ्नो परिवारसंग बस्छिन् । उनी आफ्नो स्कुल मन पराउछिन् । आफ्नो भविष्यमा उनी फर्मासिस्ट र वकिल पनि हुन चाहन्छिन् ।
जाजा ओलम्पियक मार्फत सिरिया आर्मीको आक्रमण र बमबारी भएको शहरभन्दा बढी रहेको सन्देश दिएकी छिन् । उनले सिरियाको असली जनसंख्या, परिवार, सपना र अदभुत उपलब्धि हात पार्न सक्ने केटीहरु रहेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।
एउटा सानो बच्चाको लागि यो धेरै ठूलो कुरा हो ।
यथार्थ , जाजा जम्मा १२ बर्षकी छिन् र उनले ओलम्पिक्समा प्रतिस्पर्धा गरेकी छिन् ।
जब हारको निराशाले दिएको आशु सुक्नेछ जाजाले टेबल टेनिसको सानो बोर्डबाट नै धेरै पाठ सिकाउन सफल भएको बुझ्नेछिन् ।
अल्जेरियाका जुडो खेलाडी फेथी नुरिन इजरायली प्रतिस्पर्धी पर्नेसम्भावनालाई मध्येनजर गर्दै टोकियो ओलम्पिक्स त्यागेपछि निलम्बनमा परेका छन् ।
नुरिनले अन्तिम ३२ मा इजरायली जुडोका पोटपोल ताहरसंग सामना गर्न सक्नु पर्ने देखेपछि ओलम्पिक्समा सहभागिता नजनाउनेनिर्णय लिएका थिए । यो निर्णयपछि नुरिन र उनका प्रशिक्षक अमार बेनिख्लेफलाई अस्थायी रुपमा निलम्बन गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय जुडो महासंघले अल्जेरियन खेलाडी र उनका प्रशिक्षक प्रतिबन्धमा पर्नु जायज रहेको र अब थप अन्य प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाउन बाट रोक लगाउन सक्ने बताएको छ ।
नुरिनले सोमबार पुरष ७३ केजी स्पर्धाको पहिलो चरणमा सुडानका मोहमद अब्दलरसुलको सामना गर्न गइरहेका थिए । उनले जितेको खण्डमा पहिलो चरणमा बाइ पाएका ताहरको सामना दोश्रो चरणमा गर्ने थिए ।
अल्जेरियन ओलम्पिक कमिटीले अब उनलाई टोकियोबाट घर पठाउने निर्णय लिइसकेको छ ।
नुरिनले स्पष्ट रुपमा प्यालेस्टाइनलाई राजनैतिक समर्थन गर्दै निर्णय लिएको बताएका छन् । “हामीले ओलम्पिक पुग्नका लागि धेरै मिहिनेत गरेका थियौं तर प्यालेस्टाइनको मुद्दा यो सबै कुराभन्दा ठूलो छ । यो मेरो अन्तिम निर्णय हो,” नुरिनले भनेका थिए ।
अरबी मुलुकहरुले इजरायली खेलाडीहरु बिरुद्धको कुनै पनि खेल बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो केही बर्षयता इजरायल सहभागी कुनै पनि खेल अथवा ठूलो प्रतिस्पर्धामा इरान, अल्जेरिया र लेबनन लगायतका देशहरुका खेलाडीहरुले इजरायली प्रतिद्वन्दीको सामना गर्न अस्विकार गर्दै आएका छन् ।
यसै बर्ष बिश्व बिजेता सइद मोल्लाईले इजरायली प्रतिस्पर्धीबिरुद्धको फाइनलबाट बच्न २०१९ को बिश्व जुडो च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पराजय व्यहोर्न निर्देशन आएको बताएपछि आइजेएफले इरानलाई चार बर्षको लागि निलम्बन गरेको थियो ।
नुरिनले पनि उक्त प्रतियोगितामा ताहरको सामना गर्नुको सट्टा आफूले खेलेको खेलमा हारिदिएका थिए ।
आइजेएफले अब नुरिन र उनका प्रशिक्षकबिरुद्ध अनुसन्धान गर्नेछ भने अबका खेलहरुका लागि कस्तो प्रकृतिको निलम्बन गर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय लिनेछ ।
टोकियो ओलम्पिक्सको पहिलो दिन नेपालका दुवै खेलाडी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् ।
नेपालका लागि सोनिया भट्टले जुडो र कल्पना परियारले सुटिंगमा सहभागिता जनाएकी थिइन् । सोनिया रुसकी इरिना दोल्गोभासंग पराजित भएकी थिइन् ।
इरिनाले सोनियालाई इप्पोन (नकआउट) गरेकी थिइन् । नेपालले जुडोमा अहिलेसम्म पहिलो चरण पार गर्न सकेको छैन । इरिना फाइनलसम्म पुग्ने हो भने सोनियाले रिपिचेजमा अर्को मौका पाउने छिन् ।
यस्तै कल्पनाले १० मिटर एयर राइफलमा ६ सय १६ दशमलव ८ अंक प्राप्त गरिन् । ५० खेलाडी सहभागी स्पर्धामा सोनिया ४६ औं भएकी थिइन् । यो उनको व्यक्तिगत प्रदर्शनमा भने सुधार हो ।
१० मिटर एयर राइफलमै चिनले स्वर्ण जित्दै टोकियो ओलम्पिक्समा पहिलो स्वर्ण जित्ने राष्ट्र बन्यो । फाइनलमा ओलम्पिक रेकर्ड राख्दै कियान यांगले स्वर्ण जितेकी हुन् । रुसकी अनास्टासिया गालासिनाले रजत र स्विट्जरल्याण्डकी निना क्रिष्चेनले कास्य पदक प्राप्त गरिन् ।
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद1 hour ago
अन्तर्राष्ट्रिय18 hours ago
अन्तर्राष्ट्रिय22 hours ago
बंगलादेश माथि जिम्बाब्वेको सहज जित
ओलम्पिक्स पुरुष फुटबलः फ्रान्सको लज्जास्पद हार
ब्राजिलियन लेजेण्ड फोर्मिगाको सात ओलम्पिक्सको गर्विलो इतिहास
Headline10 months ago
Headline6 months ago
Euro 20204 weeks ago
८२ वर्ष लामो किर्तिमान भंग गर्ने दाउमा इटाली
Euro 20203 weeks ago
युक्रेनको फुटबललाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका एक बिद्रोही
इटालीको उडानलाई गति दिएका सानो उल्लु
Euro 20202 weeks ago
एक रातको लागि मात्रै, स्पेनलाई ढाल्न पुरानो बनिदिएको इटाली
के साबित्राले एसियन कप छनोट खेल्न सक्छिन ?
लुकास हर्नान्डेज: एक फोन कलले बदलिएको भाग्य
इटालीलाई चलाइरहेका ब्राजिलियन मिडफिल्डर
हजार्डको रकेट गोलले ध्वस्त पारेको डिफेन्डिङ च्याम्पियनको सपना